Umtya wezemidlalo woMnyama oMnyama sele uthengisiwe kumazwe aliqela | Ndisuka mac
NgoJanuwari ophelileyo, uApple ukhuphe umtya wobunye obuMnyama, umtya lowo iya kuba kwintengiso yexeshana, njengoko kwabhengezwa yiApple kwinkcazo yayo. Xa sele kudlule iinyanga ezintathu ukusungulwa kwayo, ezinye iiVenkile zeApple ziqale ukuxhoma uphawu "oluthengisiweyo".
Ngexesha lokubhalwa kweli nqaku, eSpain akukho ngxaki zesitokhwe kunye nesacholo esineenqanawa ngemini elandelayo kuzo zombini i-44mm kunye ne-40mm ubukhulu. Ukongeza kule bracelet, iApple ikwasungule ushicilelo olukhethekileyo lwe Series 6, enemibala yeMbali eMnyama (Ubunye obuMnyama).
Uluhlu lwe-Apple Watch 6 Umanyano oluMnyama lubandakanya ukucofa okuqhelekileyo (esinokuzikhuphelela nakweyiphi na iApple Watch) kunye noluhlu lwemizobo ye-laser ngasemva. Ixabiso ngama-429 euros yenguqulo ye-40mm kunye ne-459 ye-euro yenguqulo ye-44mm. Iinguqulelo ezinonxibelelwano lwedatha ziyafumaneka nge-529 kunye ne-559 euro ngeenguqu ezingama-40 kunye nee-44 mm ngokwahlukeneyo.
Kuwo wonke unyaka, iApple ikhupha imitya eyahlukeneyo ukubhiyozela imicimbi ekhethekileyo. Ezi zinto ziqhelekileyo zihlala ziqhelekileyo iintlelo ezinqongopheleyo ukuba, xa ziyeke ukuthengiswa, azisafumaneki ukuba zithengiswe ngamajelo osasazo e-Apple.
Ke, ukuba unomdla wokufumana le strap okanye iApple Watch Black Unity, akufuneki ucinge ngayo kakhulu, njengoko kunokwenzeka ukuba kwiiveki ezizayo, isitokhwe asizukufumaneka kumazwe amaninzi, kubandakanya iSpain.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IBlack Unity Sport Band sele ithengisiwe kumazwe aliqela